Onye nrụpụta mkpuchi mkpuchi CPLA n'ogbe |Futur
Fl-FL90PLA 90mmMkpuchi CPLA dị larịị Dabara 6/8/12T oz Akwụkwọ Bowl 1000 (20*50pcs)
Fl-FL97PLA 97 mmMkpuchi CPLA dị larịị Dabara 8U/12S/16T oz Akwụkwọ Bowl 1000 (20*50pcs)
Fl-FL115PLA 115mm Flat CPLAMkpuchi Dabara 12/16/24/32 oz Mpempe akwụkwọ 1000 (20*50pcs)
Iji zute ngwa dị iche iche na ihe ndị ahịa chọrọ, a na-enye ọtụtụ nhọrọ mkpuchi ejiri ihe dị iche iche mee.
Taa, mgbe nchekwa akụ na nchekwa gburugburu ebe obibi na-abawanye uru, enwere ike dochie plastik ma kwalite ya?Ojiji zuru ebe niile nke biomass material-polylactic acid (PLA) nwere ike ọ bụghị naanị ibelata ndabere akụrụngwa nke “nsogbu mmanụ” kpatara, kama ọ ga-ekpochapụkwa mmetọ ọcha kpamkpam.
Mkpuchi CPLA dị larịị.Ihe mkpuchi ventilashị maka nri ọkụ ka ọ gaa.Ihe na-adigide nwere CPLA sitere na osisi.Ejiri osisi mee ya.Compostable n'ahịa ebe anabatara ya.
PLA polylactic acid resin bụ plastik kacha mara amara na gburugburu ebe obibi.Ọ bụghị naanị 100% sitere na osisi, kamakwa 100% plastik nwere ike imebi kpamkpam.Ọ dị mma, anaghị egbu egbu na gburugburu ebe obibi.Ọ bụ nhọrọ mbụ maka ngwaahịa rọba na gburugburu ebe obibi.Otú ọ dị, ihe PLA dị ọcha nwere nsogbu nke nkwụsị okpomọkụ (ngbanwe n'elu 55 ° C) na enweghị ike mgbanwe.Ya mere, ụlọ ọrụ anyị emepụtala ihe PLA gbanwetụrụ nke nwere ike mee ka okpomọkụ na-ekpo ọkụ na-emetụta ngwa ngwa, nke nwere ike kristal ngwa ngwa na ebu.A na-emeziwanye nguzogide okpomọkụ nke rọba CPLA nke ukwuu mgbe kristal gachara, ọ pụkwara ikpo ọkụ ruo 120 Celsius C ma ọ bụ karịa.Mgbe kristal gachara, elu ahụ nwere nnukwu gloss ma nwee mmetụta dị ka poselin.Ọ bụ ugbu a ihe kachasị mma iji dochie plastik.
Anyị emeghari ohuruCPLA mkpuchi.Ihe mkpuchi CPLA a dị mma maka nri ọkụ ma ọ bụ salad, ma ọ bụ ofe ọkụ ịga.Ha na-adabara ma na-ekpo ọkụ na oyiefere akwụkwọ nrima bụrụ ofe na-echekwa ihe ọzọ dị na gburugburu ebe obibi dị ka nke nkịtịmkpuchi plastik. Emere site na CPLA, ihe a na-emegharịgharị site na osisi.Agba na-adịghị na-acha ọcha, nke ejiri ozi compostable tinye ya.Ejiri osisi mee ya.Compostable n'ahịa ebe anabatara ya.
Anyị na-eji ịdị arọ dị arọ, àgwà adịchaghị mmaihena-enye anyịMkpuchi CPLAelu kwụsie ike, mmaCPLAmkpuchi kwesịrị ekwesị na mkpuchi.CPLA anyịmkpuchia na-ahazi dị ka nnukwu efere akwụkwọ anyị si dị, dabara maka efere akwụkwọ ofe anyị niile & nnukwu efere akwụkwọ.
Dị iche iche nha si 90mm & 97mm & 115mm.
Ihe mkpuchi CPLA nwere ike ịgbakọ na nke enwere ike ịmegharị ya.
· Nhazi dịịrị iji gosi akara gị.
Nke gara aga: Mkpuchi akwụkwọ
Osote: PP mkpuchi